Faah faahin:- Weerar bam-gacmeed maanta lagu weeraray xarun ay ku sugnaayeen ciidanka Jubbaland – Bulshoweyn Online | Your Source Of News And Entertainment
Faah faahin:- Weerar bam-gacmeed maanta lagu weeraray xarun ay ku sugnaayeen ciidanka Jubbaland
Wararka naga soo gaaraya magaalada Kismaayo ee xarunta gobolka J/hoose ayaa sheegaya in xarun ay leeyihiin ciidamada nabad sugida maamulkaasi lagu tuuray bam-gacmeed sababay khasaare.
Inta la xaqiijiyay waxaa Bam-gacmeedka ku dhaawacmay ilaa shan askeri oo ka tirsanaa ciidanka nabad sugida maamulka Jubbaland, iyadoo weerarka kadib ciidamada ay bilaabeen howl galo ay dad badan ku qab qabteen.
Waxaa inta uu howlgalka socday saameen aad u balaaran uu ku yeeshay isu socodka dadka, gaadiidka iyo ganacsiga ka jiray magaalada Kismaayo, iyadoona howlgalkaasi lagu soo qab-qabtay ku dhowaad ilaa boqol qof.
Dhinaca kale, saraakiisha maamulka Jubbaland oo la hadlay warbaahinta gudaha ayaa sheegay in magaalada Kismaayo uu weli ka socdo howl gal lagu baadi goobayo kooxo bam gacmeed ku weeraray xarunta nabad sugidda maamulka Jubbaland ee ku taala magaaladaas.
Ma jirto cid ilaa iyo haatan sheegatay mas’uuliyadda weerarkaasi maanta lagu weeraray xarunta ciidankaasi nabad sugidda maamulka Jubbaland, waxaana uu weerarkaan qeyb ka yahay weerarada ay xilli kasta magaalada Kismaayo ka geystaan dagaalyahanadda Al-shabaab.